छोपिँदै–खोलिँदै मान्छेको सभ्यता- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
त्यो आदिम रुखको बोक्राले ब्लु जिन्सको ठाँटमा आफूलाई कसरी बदल्यो होला ? भारी गहना र पोसाकमा ठाँटिने राजा, महाराजाको सन्तान र एकसरो कपडामा काँप्ने रैतीहरु उस्तै कपडामा देखिने जमाना आउन सभ्यताले कति पाइला हिँड्यो होला ? संसारका अन्य मुलुकको तुलनामा ‘कुलीन’ र ‘कुल्लीहरु’ उस्तै लुगामा देखिन नेपाललाई कति समय लाग्यो ?
माघ १०, २०७७ सरला गौतम
मान्छेले कहिलेबाट आफूलाई ढाक्न सुरु गर्‍यो होला ? प्रायः हामी सबैले सुन्दै आएको कथा हो– ‘रूखको बोक्रा बेरेर हिँड्थे रे हाम्रा पुर्खाहरू !’
त्यो आदिम रूखको बोक्राले ब्लु जिन्सको ठाँटमा आफूलाई कसरी बदल्यो होला ? भारी गहना र पोसाकमा ठाँटिने राजा, महाराजाको सन्तान र एकसरो कपडामा काँप्ने रैतीहरू उस्तै कपडामा देखिने जमाना आउन सभ्यताले कति पाइला हिँड्यो होला ? संसारका अन्य मुलुकको तुलनामा ‘कुलीन’ र ‘कुल्लीहरू’ उस्तै लुगामा देखिन नेपाललाई कति समय लाग्यो ? सस्ता र न्याना चाइनिज कपडाको कारण आज धनीमानीकै दाँजोमा गरिबहरू पनि न्यानो लुगामा देखिन्छन् । सञ्चारको दुनियाँ शक्तिशाली छ । आज लन्डनको कुनै सहरमा देखिएको पोसाकको नमुना नेपालकै कुनै गाउँमा देखियो भने अचम्म मान्ने दिन गयो । ब्लु जिन्समा हल्लिएका तन्नेरी जुनसुकै गाउँमा भेटिन्छन् । तीन दशकअघि नै अक्सर ब्रिटिस र हङकङका लाहुरे परिवारका महिलाले लगाउने थाइल्यान्डको लामो मिडी र युकेको स्वेटरको रवाफ नेपालका साना सहरमा भित्रिसकेको थियो । हरहिउँदमा एउटा युकेको स्वेटर किन्ने त्यो बेलाका महिलाहरूको पहिरनी प्रतिज्ञा हुन्थ्यो ।
कपडासँग जोडिएका यस्तै परिदृश्यबीच माइनिके स्किपरको पुस्तक ‘न्याकेट अर कभर्ड– अ हिस्ट्री अफ ड्रेसिङ एन्ड अनड्रेसिङ अराउन्ड द वर्ल्ड’ हात पर्‍यो । यही पुस्तकमा आधारित रही पोसाकको इतिहास, राजनीति र समाजशास्त्रको उत्खनन गर्ने कोसिस गरेको छु ।
शरीरमा बेरिएको एकसरो लंगौटीको चलन फैलिएर संसारभरि पुग्यो । ह्वांग परेको खुला छातीमा निर्धक्क डुल्ने महिलाहरू, छोपिने र खुल्नेको असाधारण यात्रा पार गर्दै बिकिनी लगाएर समुद्री तटमा कावा खान थाले । मानिसको संसार नांगैबुंगै थियो, समयक्रममा मानिसको दुनियाँमा सरमले सानदार एन्ट्री मार्‍यो । मानिस छोपियो ।
समय फेरिँदै गयो, सरमको पर्दा फेरि पातलो हुँदै जान थाल्यो, मानिस फेरि खुल्न थाले । खुल्दै, छोपिँदै, खुल्दै, मानव सभ्यताको यात्रा कहाँसम्म जान्छ होला ? कोही हलाल बाथ (इस्लाम धर्म मान्नेहरूले पूरै शरीर छोपेर नुहाउने चलन) सम्म पुगेका छन्, कोही टपलेस–बाथमा मस्त छन् । एउटै धर्तीबासीले एकले अर्कोलाई हेर्दा बिजुलीको झड्का लाग्ने अवस्था छ ! पुरातन सत्ताले भन्छ, ‘पूरै शरीर छोपेर हिँड ।’ बजारको सत्ताले भन्छ, ‘देखाइदेऊ मेरो सामान बेचिदेऊ ।’ मानिसको विवेकले यो दुई ध्रुवबाट आफ्नो बाटो पहिल्याउँदै जाँदै छ ।
पोसाकले मानिसको देश, भूगोल, समाज बोलिरहको हुन्छ । अहिलेको संसारमा कपडा परिचय–मापन अस्त्र बनेको छ, सिंगो शरीर एक बिजनेस कार्ड !
आदिम समाजमा पुरुषको यौनांग र छातीको चौडाइको मूल्यांकन गरी महिलाहरू आफ्नो साथी रोज्थे । भावी सन्तानको रूपरेखा नाप्थे । पुरुषहरू महिलाको छातीको पुष्टता र नितम्ब हेरेर आफ्नो भावी सन्तानको गुणस्तर आकलन गर्थे । सामाजिक, आर्थिक हैसियत पुरुषको भन्दा कमजोर हुँदै जाँदा पनि शरीर मापन गरी यौनसाथी छान्ने कुरामा महिलाहरूको हैकम बढी चल्थ्यो । पुरुषको लागि बिस्तारै यो कुरा काँडा बन्यो । आफ्नो गोप्य अंग मापनसँग पुरुषहरू त्रसित हुन थाले । समयक्रममा अफ्रिकाका पुरुषहरूले यौनअंग छोप्ने सानो वस्त्र लगाउन थाले । पछि यो फैलिएर संसारभर पुग्यो । हाम्रै जिजु, हजुरबाहरूले पनि लंगौटी लगाएर पूजाआजा गरेको हामीले देख्यौं । पुरुषहरूले अंग लुगाउन थाले पनि महिलाहरूको छाती र नितम्बको भव्य प्रदर्शन भने आजसम्म सहरका बिलबोर्डहरूमा भइरहेछ ।
शरीर जति देखिन्छ उत्तेजना उति तीव्र हुन्छ भन्नु फगत भ्रम हो । जति छोपिएको हुन्छ उति कल्पना तीव्र हुन्छ भन्ने ठम्याइ छ मानवशास्त्रीहरूको । पुरातन समाजमा महिलाले खुला छाती लिएर हिँड्नु पनि सामान्य थियो । अहिले महिलाको क्ल्भिेज चियाउन पाउँदा पनि करेन्ट लागेर फत्रक्क हुन्छन् मानिसहरू । अध्येताहरू भन्छन्– महिलाको ओठ र हाँसो हेरेर योनिको रूपरंग अन्दाज गर्दै बस्छन् पुरुषहरू ! यहुदी उखान नै छ, ‘खुला ओठले खुला योनि र बन्द ओठले बन्द योनिको संकेत गर्छ ।’ कपडासँग जोडिएको आचरण र नैतिकता परापूर्व समाजमा थिएन । समाजका कट्टरहरूले बिस्तारै भित्र्याएका हुन् । कपडालाई लिएर नैतिकताको मापदण्ड संसारभरकै समाजमा विविध छ । एउटै समाजको एकै टोलमा पनि नजर फरक–फरक छ । एउटा घरमा ‘अहा सेक्सी’ लाग्ने कपडा अर्को घरको मानिसलाई ‘छ्या उत्ताउलो’ लाग्न सक्छ । पहिरनलाई लिएर हुने आलोचना र प्रशंसा विश्वव्यापी प्रक्रिया हो । यसैले भनिन्छ, ‘जजमेन्ट’ हेर्ने मानिसको आँखामा हुन्छ । देखाउने र छोप्नेको तनाव र सम्झौताको अविरल यात्रामा मानिस हिँडिरहेको छ ।
सामाजिक नैतिकता र कपडा
कपडासँग टाँस्सिएको नैतिकताको सम्बन्धमा चिनियाँ उखान छ– भोकले मर्नु ठुलो कुरा होइन, नैतिकता धरापमा पर्नु महाप्रकोप हो ।’ सभ्यताको सुरुआतको निकै पछिसम्म पनि नांगोपनसंँग भद्रता र नैतिकताको सम्बन्ध धेरै समुदायमा थिएन । सातौं शताब्दीको नजिकसम्म पनि मध्यएसियामा महिलाले आफ्नो शरीरको माथिल्लो भाग खुला राख्नु सामान्य मानिन्थ्यो । क्रिस्चियनिटी र इस्लामिक सम्प्रदायको प्रभाव बढेसँगै शरीर प्रदर्शन अस्वाभाविक भयो । नांगोपन, पाप, धर्म र नैतिकतासँग जोडिन पुग्यो । सुरुआतमा कुनै पनि धार्मिक सम्प्रदाय कट्टर थिएनन् । कट्टरता समाज विकाससँगै विकसित भएको हो ।
मानिसले प्रकृतिसँगको सुरक्षाका लागि पहिरन आविस्कार गरेको हो । हाम्रा पुर्खा जब दुई खुट्टाले हिँड्न थाले, तब उनीहरूले आफ्नो यौनांगको गतिशीलतामा ध्यान पुर्‍याउन थाले । ठिंग उभिन सक्ने भएपछि पुरुषले आफ्नो सम्भावित यौनसाथीको ध्यान आफूतिर अझै सानसँग खिच्न थाले । अस्वाभाविक यौन उत्तेजनालाई अरूको नजरबाट जोगाउन पनि यौनांग ढाक्ने चलन सुरु भएको मानिन्छ । हिजोदेखि आजसम्मै पुरुष जनेन्द्रियको अप्रत्याशित व्यवहारले स्वयं पुरुषहरू नै मर्कामा परिरहेका हुन्छन् । पुरानो समाजमा पुरुषहरू आफ्नो उत्तेजनाको जवाफदेहिता आफैं लिन्थे । यही कारण पनि उनीहरूले महिलाको नजरबाट आफ्नो गोप्य अंग लुकाउन थाले ।
सन् १४९८ मा कोलम्बस ट्रिनिड्याड टापुमा पुग्दा महिलाहरू नांगै घुमेका भेटेका थिए, पुरुषहरूको कम्मरमा पेटी बाँधिएको थियो । समाज अध्येता विनउड डब्लु रिडले आफ्नो अध्यनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘अमेरिकाको ओरिनोको एरियामा आदिवासीहरूलाई त्यहाँ पुगेका पादरीहरूले सम्मानपूर्वक कपडा दिए । आदिवासीहरूले कपडा समुद्रमा मिल्काइदिए । दिने मानिसहरू चकित परे, लिनेहरूको तर्क थियो– कपडा लगाउने चलन उनीहरूको भद्रतामा प्रहार हो ।’ अफ्रिकाको हिम्बा समुदाय र स्वाजिल्यान्डको स्वाजी समुदायमा महिलाहरूले वक्षस्थल देखाउनुलाई अझै पनि सामान्य मानिन्छ । विशेष अवसरहरूमा छाती देखाएर नाच्नुलाई फेमिनिटी सेलेब्रेसनको रूपमा लिइन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्दा पनि राउटे जाति प्रकृतिसँग समीप भएर आधुनिकतालाई बेवास्ता गर्दै जीवनयापन गर्ने जाति हुन् । उनीहरू अन्य समुदायजस्तो गरी पहिरनको आधुनिक संसारमा अझै प्रवेश गरेका छैनन् ।
नैतिक मूल्यमान्यता जोगाउन होइन, विपरीतलिंगीलाई आकर्षित गर्नका लागि पहिरनमा ध्यान दिन थालेका हुन् मानवले । सिंहले प्रेमिका फकाउन मुखवरिपरिको लामो–लामो भुत्ला नचाउने गर्छ । मयूर पंख फिजाएर नाच्छ । मानव भाले–पोथी भने अहिले कपडामा पुगेका छन् । आजको संसारमा भने सुन्दर भएर अर्को लिंगलाई आकर्षण गर्ने जिम्मेवारीको भारी महिलाको काँधमा बढी छ । अक्सर पुरुषहरू भने अर्को पुरुषभन्दा आफू कम बौद्धिक नदेखियोस् भनेर हरदम सचेत रहन्छन् । सतहमा नदेखिए पनि एकअर्काप्रति तीव्र प्रतिस्पर्धामा रहिरहन्छन् । अरबी उखान छ, ‘पुरुषको सौन्दर्य उसको बौद्धिकतामा हुन्छ, महिलाको बौद्धिकता उसको शृंगारमा हुन्छ ।’ यस्ता उखान विभिन्न समाजमा पाइन्छन् । अहिले भने बौद्धिक र भद्र पुरुषहरूले बौद्धिक महिलाहरूमा आकर्षण पाउन थालेका छन् । तर, यो निकै कम, मुठ्ठीभरका मानिसहरूमा मात्रै । पुरुषहरूको अंग जाँचेर साथी छान्ने महिलाको पुरानो सहुलियत गायब भयो । पुरुषको गुण जाँच्ने मानक भने बौद्धिकता र आर्थिक हैसियत भयो । यसैले संसारभरि नै पुरुष महिलाका शरीरकै पछि भागिरहेको देखिन्छन् ।
निजी सम्पत्तिको सुरुआतभन्दा पहिला महिलाहरू सामाजिक र आर्थिक रूपमा सबल थिए । दोस्रो शताब्दीसम्म पनि एन्सियन्ट मेसोपेटामिया (अहिलेको इराक) मा महिलाहरूको बलियो सामाजिक–आर्थिक हैसियत थियो । दोस्रो शताब्दीको अन्त्यतिर यहाँका महिलाहरूले बिहेमा टरब्यान नामको पोसाक लाउने परम्पराको सुरुआत भयो । दाजुभाइले यो पहिरन दिने, श्रीमान्ले लगाइदिने चलन सुरु भयो । यसको समाजशास्त्रीय मनोविज्ञान हो– ‘पहिरन त्यो मानिसले लगाइदिन्छ जसले फुकाल्ने हक राख्छ ।’ बिस्तारै संसारभरका समाजमा महिलाको शरीर र पहिरन पुरुष हैकमको भ्यालखानामा कैद भयो । जसले कमाउँछ–खुवाउँछ, उसको शरीर र पोसाक उसैको नियन्त्रणमा रहन्छ । यसैले आफूमाथि जबरजस्ती थोपरिएका पोसाकविरुद्धमा महिलाहरूको संघर्ष जारी छ । दिल्लीको जेएनयू विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले ‘सारी र सिन्दूर जबरजस्ती किन ?’ भन्दै २०१९ मा प्रदर्शन गरेका थिए । हाफ प्यान्टमाथि सारी बेरेर खिचिएको युवतीको तस्बिर छाप्दै ‘इन्डिया टुडे’ ले केही दिनअघि यही विषयमा रिपोर्ट छापेको छ ।
कपडासँग जोडिएको मानिसको नीति र कानुन संसारभरका समाजमा विविध र जटिल छ । पर्दाभित्र, घुम्टो र बुर्काभित्र बस्न बाध्य पारिएका महिलाहरू सामाजिक हैसियतमा कमजोर हुन् कि जस्तो लाग्छ । तर, यसो होइन पुरानो इराकमा खानदानी महिलाहरू पर्दाभित्र बस्ने, घुम्टो ओढ्ने चलन थियो । दासि र बेश्याहरूले घुम्टो ओढे भने ज्यान नै लिनेसम्मको सजाय दिइन्थ्यो । घुम्टो ओढ्ने कुरा समाज हेरिकन कुलीनताको प्रतीक हो, पछ्यौटेपनको प्रतीक पनि !
महिलाको कपडालाई पुरुष उत्तेजनाको आधार मान्न थालेदेखि नै नियन्त्रण पनि सुरु भएको हो । कट्टर समाजहरूले कपडामाथि नियन्त्रण गर्न थाले । आर्थिक रूपमा गतिशील हुने महिलाहरूले पनि चुस्त कपडा लगाउन समाजको नीतिले दिएन । नेपालका सहरहरूमा महिलाहरू साइकल कुदाएर दूध, तरकारी, फलफूल बेच्ने आर्थिक क्रियाकलापमा लागेका देखिन्छन् । तर, उनीहरूले सजिला पोसाक होइन सारी वा कुर्तामा साइकल हाँकिरहेका दृश्य आजसम्मै देखिन्छ । तर, पोसाकप्रतिको कट्टरता बिस्तारै भत्किँदो पनि छ । यसमा सामाजिक सञ्जालले घर–घरमा भित्र्याएको संसारभरिको दृश्यले पनि काम गरिरहेको होला । दुनियाँ देख्न दुनियाँ धाउनै पर्दैन । सहर बजारमा मात्र होइन गाउँघरमै पनि आधुनिक वस्त्रधारीहरू विचरण गरिरहेका देखिन्छन् ।
पुरातनी माध्यताहरूमा प्रहारसँगै महिलाको पोसाक र पुरुष उत्तेजनालाई लिएर गरिने तुलनाको विरोध संसारभरै हुन थाल्यो । अहिले यो तीव्र गतिमा छ । रोमन क्याथोलिक चर्चमा सन् १९६५ मा प्रार्थनाको समयमा महिलाले शिर ढाक्नैपर्ने चलन हटाइयो । यसको मतलब हो, तिम्रो कर्तुतको जिम्मा तिमी आफैं लिनु । महिलाको छोटो लुगाले बलात्कारको घटना हुने गर्छ भन्ने असभ्य सोच राख्नेहरू अहिलेको समाजमा पनि जीवन्त छन् । यसको विरोध पनि चर्को छ । समाज पुरातनी ह्याङओभर र आधुनिक स्वच्छ हावाको बीच बीचबाट तैरिरहेको देखिन्छ ।
समाज विशाल वृक्षजस्तो हो । मानिस र समुदाय यसैका हाँगा–बिँगा र जराहरू हुन् । सामाजिक नीति र व्यवहारभन्दा उल्टो बाटो हिँड्दा मानिसलाई सहज हुँदैन । ऊ आफ्नो समाजमा स्वीकृत र प्रशंसित भइरहन चाहन्छ । कहिले–कहिले मानिसको व्यक्तिगत नीति र समाजको नीतिमा मेल खाँदैन । धेरै मानिसलाई समाजविपरीत चल्ने आँट पनि हुँदैन । केही यस्ता मानिस हुन्छन्, जसको आफ्नै साम्राज्य, आफ्नै नीति हुन्छ । रूढता, अतिवादसँग लड्न होस् वा नितान्त व्यक्तिगत सोख पूरा गर्न, यस्ता मानिस समाजको पर्वाह गर्दैनन्, जोखिम उठाउने असाधारण हिम्मत बोकेका हुन्छन् । कपडाबाटै सौन्दर्य र हैसियतको मापन गर्नेहरूको दुनियाँमा, नांगाहरूको आफ्नै संसार पनि छ । यी बागी उम्मेदवारहरूको कथाले इतिहासमा रङ भरेको छ ।
सन् २००८ देखि नै बेलायतमा स्टिफन गोह नांगै म्याराथन गरिरहेका छन् । उनको लडाइँको मर्म ‘मानिस आफ्नो प्राकृतिक स्वरूपमा रहन पाउनुपर्छ’ भन्ने हो । यो आधारभूत मानवअधिकारका लागि लडाइँ हो भन्छन् उनी । आजसम्म पनि उनलाई नांगै पक्रने र छोड्ने क्रम जारी छ । उनी सर्वांग झ्यालखाना पस्छन्, सर्वांग निस्कन्छन् । यो चक्रजस्तै गरी घुमिरहेको छ । सन् २०१२ मा ‘गार्डियन’ पत्रिकाले उनको अन्तर्वार्ता छापेको थियो । अन्तर्वार्ता लिने पत्रकार सरमले हायलकायल थिए, स्टेफन आफ्नो नांगोपनमा मस्त थिए ।
कट्टर मुस्लिम सम्प्रदायका महिलाहरूसमेत बेलाबेला कठोर सामाजिक नीतिविपरीत उस्तै कडा भएर जवाफी व्यवहारमा उत्रन्छन् । सन् २०१३ मा टुनिसियामा यस्तै जरा हड्के समाचारले सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिका भरिए । १९ वर्षे अमिना सबोईले आफ्नो शरीरको माथिल्लो भाग खुला राखेर फोटो खिचाइन् । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिन् । सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको रियाक्सन ज्वालामुखी विस्फोट भए बराबरको थियो । उनले आफ्नो शरीरमा लेखेकी थिइन्, ‘मेरो शरीर मेरो हो, यसमा कसैको इज्जत टाँसिएको छैन ।’ कट्टरपन्थीहरूले यो घटनालाई महाप्रकोप, दैवीप्रकोप बराबर हो भने । अमिनाले ज्यान मार्ने धम्की पाउनु त सामान्य भइहाल्यो । परम्पराले कपडाभित्र मानिसलाई पूरै कैद गरेर राख्छ, बजारले कपडा खोलाएर प्रयोग गर्छ । यी दुई अतिविरुद्धको राजनीतिक जेहाद भनेकी छन् अमिनाले आफ्नो कदमलाई ।
तीन किसिमका मानिसहरू नांगोपनका पछाडि लागेका देखिन्छन् । एकथरी स्वाभाविक प्राकृतिक स्वरूपमा रहन चाहन्छन् । अर्को सामाजिक कुरीतिको विरुद्धमा नांगोपनको प्रयोग गर्छन् । अर्को एटेन्सनसिकर हुन्छ, जो अरूको नजरमा परेर चर्चा कमाउन चाहन्छन् । चार शताब्दीमा नर्थ अफ्रिकामा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको एउटा समूह बन्यो । उनीहरू अदाम र इभको संसारमा फर्कन चाहन्थे । अडामाइट्सहरूको यो समूहले ‘भगवान्को राज्यमा मानिस जुन स्वरूपमा छ त्यही रूपमा हुन पाउनुपर्छ’ भनी वकालत गर्थे । संसारमा फैलिएको अन्याय र अत्याचार हटेर भगवान्को राज्य बन्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता थियो ।
सन् १५३० मा अडामाइट्सको समूह युरोपमा प्रसिद्ध हुन थाल्यो । संसारमा भगवान्को राज्य हुनुपर्छ, अन्यायमुक्त हुनुपर्छ भनेर उनीहरू आम्सट्रडमको सडकमा नांगै दौडिए । उनीहरूले सन् १५३५ मा आम्सट्रडमको सिटी हल कब्जा गरे । यो समूहलाई तत्कालीन कट्टर धार्मिक समूह र सरकारले रुचाएको थिएन । सिटी हल नै कब्जा गरेपछि प्रशासन उनीहरूविरुद्ध जाइलाग्यो, क्रूर सामूहिक हत्या गर्‍यो । उनीहरूको मुटु जिउँदै निकालेर उनीहरूकै मुखमा फालियो ।
समाजको नीति र समाजमा बस्ने मानिसहरूको क्रियाकलाप समय समयमा बाझिरहन्छ । नांगोपनलाई सामाजिक अन्यायको विरुद्धमा उपयोग गर्नेहरू पनि संसारभरि नै फैलिएका छन् । भारतको मणिपुरमा २००४ मा बाह्र जना महिला ब्यारेकबाहिर नांगै उभिए । आर्मीका सिपाहीद्वारा मनोरमा नामकी किशोरीको बलात्कारपछि हत्याको विरोध थियो उनीहरूको । स्लोगन थियो, ‘हामी सबै मनोरमाका आमा हौं ।’ मणिपुरको यो आन्दोलनले संसारको ध्यान खिचेको थियो । नेपालमै पनि १२ वर्ष पहिला बादी समुदायका महिलाहरूले आत्मसम्मान र पुनःस्थापनाको माग गर्दै २०६४ साल भदौ ५ मा सिंहदरबारअगाडि अर्धनग्न प्रदर्शन गरेका थिए । अविरल झरीजस्तो गरी आन्दोलन ४८ दिन चल्यो । सरकारसँग दुईबुँदे सम्झौतापछि आन्दोलन थामिएको थियो ।
प्रकृतिसँगको सामीप्यमै रहन नांगै हिँड्नेहरू त आदिम समाजदेखि आजसम्मै भेटिन्छन् । कति घटना रेकर्डमा आउँछन्, कति यत्तिकै हराउँछन् । संसारभर पनि आजकै दिनमा कति मानिसहरू नांगै हिँडिरहेका होलान्, यसको हिसाब राखिएको छैन । शिवरात्रिका बेला पशुपतिनाथको वरिपरि देखिने नागा बाबाहरूको चटक अर्को प्रसिद्ध हर्कत हो । हरेक वर्ष यसको विरोध र समर्थनमा मानिसहरू तात्ने गर्छन् ।
दार्शनिक पिक टार्कले आफ्नो अध्ययनमा बताएअनुसार, अलेक्जेन्डर सिन्धु नदीको किनारमा बाह्र जना नागा बाबाहरूसँग आमनेसामने भएका थिए । त्यतिबेला युरोपमा कपडा लगाउनु सामान्य थियो, नग्नता असामान्य । नागा बाबाहरूको मस्त अन्दाजसँग अलेक्जेन्डर जिल खाएका थिए । समयको चक्र पश्मिेलीहरूको नग्नता देखेर पूर्वी ध्रुवका मानिसले जिब्रो टोक्ने दिन पनि आयो ।
अमेरिकाको भर्जिनिया स्टेटको एउटा चर्चमा नांगै प्रार्थना गर्ने चलन छ । पादरी एलन पार्करको यसमा तर्क छ, ‘मानिसहरू आफ्नो दागसहित नांगै उभिन्छन् । हर मानिसमा खोट छ भन्ने देखिन्छ । कपडामा टाँसिएको फरक मूल्यले मानिसहरूबीचको असमानता यहाँ हुँदैन ।’ सीएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा पार्करले ‘न्युडिटी समानतातर्फको यात्रा हो’ भन्ने जवाफ दिएको थिए ।
मानिस आफ्नो स्वरूपमा रमाउने प्राणी हो । नांगोपन पनि त्यही हो । यही कारण मानिसहरू आफ्नो घरको निजी स्पेसमा नांगो शरीरसँग रमाइरहेका हुन्छन् । कुनै यौनिक आनन्दका लागि मात्र होइन, आफैंसँगको आनन्दका लागि पनि मानिसलाई न्युडिटी मन पर्छ । यहीकिारण संसारभर स्पा, साउना, स्विमिङ पुलहरू र समुद्री तटमा रमाइरहेका मानिस भेटिन्छन् ।
परम्परागत समाजमा सार्वजनिक धारा र खोलाहरूमा नांगै नुहाउनुलाई सामान्य मानिन्थ्यो । पछि यसमा सामाजिक नीतिको अंकुश लाग्दै गयो । सार्वजनिक ठाउँमा शरीर देखाएर नुहाउने चलन हराउँदै गयो । सन् १९४६ मा मात्र युरोपमा बिकिनी अस्तित्वमा आयो । त्यतिबेला भर्खरै आणविक परीक्षण गरिएको बिकिनी टापुको नाम यो पहिरनलाई दिइएको हो । तर, यो पहिरन शरीरमा पहिरिएर धेरै मानिसको उत्तेजना विस्फोट गराउन भने त्यतिबेलाका मोडलहरू नै हिच्किचाए ।
नांगोपनमा सबैभन्दा मनोरञ्जकहरू हुन्– खेल मैदानमा नांगै कुद्ने स्ट्रिकरहरू । यिनीहरू केवल अटेन्सन सिकरहरू हुन् । सन् १९७४ मा इङ्ल्यान्ड र फ्रान्सबीच रग्बी वर्ल्ड कप हुँदै थियो । मैदानमा माइकल ओब्रायन नामका व्यक्ति नांगै दौडिए । हल्लीखल्ली भयो, प्रहरीहरू उनको पछि लागे । एक प्रहरीले आफ्नो हेलमेट फुकालेर उनको गुप्तांग छोपिदिए । अर्को प्रहरी कपडा लिएर उनीतिर आउँदै गरेको एक पुस्तकमा समावेश तस्बिरमा देखिन्छ । उनको गुप्तांग छोपिएको हेलमेट पछि चौबीस सय डलरमा वर्ल्ड रग्बी म्युजियममा लिलाम बिक्रीमा राखियो । त्यसपछि क्रिकेट, फुटबल वा रग्बी जुनै खेल हुँदा होस्, संसारभरका खेल मैदानमा यस्तो हर्कत सामान्य हुन थाल्यो । आजकाल टीभी हेर्दाहेर्दै खेल मैदानको होहल्ला मात्र आयो र क्यामेरा अन्तै घुम्यो भने दर्शकले बुझे हुन्छ फोकटको मनोरञ्जन छुट्यो ।
मान्छे शरीर प्रदर्शनको नियतले नांगिनु र प्रकृतिसँग एकाकार जीवन बाँच्न नांगोपनलाई आत्मसात् गर्नु फरक कुरा हो । यो मान्यता नांगोपनको वकालत गर्नेहरूको छ ।
शरीरलाई ढाक्नैपर्ने अतिवादी नियमहरूलाई सन् १९६० को दशकमा उदाएको हिप्पी कल्चरले सक दियो । पश्चिमेली युवाहरूले पुरातन र विभेदमाथि आफ्नो जीवनशैलीबाटै प्रहार गर्न थाले । हरसमूहका महिलाहरू समुद्री तटमा टपलेस स्नान गर्न थाले । फ्रान्सबाट सुरु भएको यो अभियान पूरै युरोपमा फैलियो । बिकिनी नै फ्लप खाएको जमानादेखि, समुद्री तटमा रंगीबिरंगी बिकिनीहरू थरीथरीका शरीरमा मुस्कुराइरहेका दृश्यहरूको साक्षी बसेको छ पहिरनको इतिहास । पूरै कपडामा बेरिएर हलाल बाथ गर्ने इस्लामिक युवती र शरीरलाई छोपेजस्तो मात्र गरेर बालुवामा पल्टने युवती एकअर्कालाई हेर्दै जिल खाइरहेको संसारमा हामी छौं ।
आदिकालदेखि नै शक्तिमा आसीन मानिसहरू आफ्नो हाउभाउ र पहिरनबाटै अरूभन्दा पृथक् देखिन चाहन्छन् । भनाइ नै छ, ‘चराको प्वाँखबाट उसको पहिचान थाहा हुन्छ ।’ यो बिनापोसाकको संसारबाट पोसाकको दुनियाँमा मारेको एक फट्को थियो । तर, पहिरनको दुनियाँको आफ्नै धेरै फट्का छन् । पहिरनसँग जोडिएको वर्गीय र कुलीनताका पत्रहरू हरेक समाजमा छन् ।
अहिलेको संसारका मानिसहरू थरीथरीका ब्रान्ड भ्यालु आफ्नो शरीरमा टाँसेर आफ्नो महत्त्व स्थापित गर्न लागिपरेका देखिन्छन् । मानिसको समाजमा राजनीतिक, सामाजिक सत्ताको हैकम राज्यसत्ता चलाउनेदेखि सामाजिक रूपमा आफूलाई ठालू ठान्नेसम्म फैलिएको छ । हिजोका राजा रजौटाजस्तै आजका कुलीन, हुने–खाने र सेलिब्रिटीहरूले विभिन्न ब्रान्डका कपडामा आफ्नो रवाफ पेस गरिरहेका देखिन्छन् ।
चाइनाको परम्परागत कुलीन पोसाकको सामन्ती रवाफलाई सिभिल वारले छिनोफानो गरिदियो । सन् १९४९ अक्टोबरमा बेइजिङको मुटुमा माओले लाखौं मानिसलाई सम्बोधन गरे । लाखौं मानिस नीलो, कालो र खैरो रङको लुगामा देखिए । सैनिकहरू एकै पोसाकमा तैनाथ रहे । पछि सन् यात्सेनले लेनिन कोट र माओ सुटको अवधारणा विकास गरे । सन् १९६० को आर्थिक मन्दीपछि भने चाइनामा केवल दुईथरी पोसाक देखापरे– सैनिक पोसाक र कामदारको पोसाक । बिहे भोजमा समेत लगाउन सैनिक पोसाकको ग्ल्यामर बढ्यो ।
कपडासंग शक्ति र सुन्दरताको इतिहास अंगअंगमा प्वाखहरू टाँसिएजस्तो टाँसिएर आएका छन् । आज जतिथरी पोसाक संसारभरि छन्, यी सबैसँग इतिहासका पत्ताहरू जेडिएका छन् । महिलाहरूले लगाउने टाइट सेक्सी स्कर्टकै कुरा गरौं न ! यो आजका हाम्रा प्रबल गुरुङ वा विश्वप्रसिद्ध अर्को कुनै डिजाइनरले एक झपटमै बनाएका होइनन् ! योसँग मानिसको सभ्यता, समाज, भूगोल र मौसम पनि जोडिएको हुन्छ ।
आफ्नो पुस्तक ‘फिमेल ड्रेस एन्ड न्याचुरल डिभलपमेन्टमा’ अनुसन्धानकर्ता कार्ल हेनरिकले ट्रपिकल र आर्कटिक पहिरनको बारेमा उल्लेख गरेका छन् । स्कर्ट, एप्रन र तिनको विविध रूप युरोपको दक्षिण साउथबाट सुरु भयो । ट्राउजरको विविध रूप युरोपको उत्तरी चिसो भूभागबाट सुरु भएर अन्त फैलियो । युरोपको चिसो उत्तरी भागमा लडाकु र सिकारीले मन खाएको पोसाक थियो ट्राउजर । मौसमसँग पंगा लिन उनीहरू यो लुगा लगाउँथे । पछि जर्मनहरूले यसको नक्कल गरे । ट्राउजर युरोपतिर बरालिन जानुभन्दा पहिले नै पर्सियनले पत्लुन लगाउँथे । ग्रीक र रोमनहरू ट्राउजरलाई असभ्य र पाखण्डी लुगा भन्थे । मानिसले लगाउने कपडाले शक्ति र सभ्यताको विम्ब पनि भिरेर हिँड्न थाल्यो । राजा–रजौटा र शक्तिशालीको पहिरन शैली, रैती भनिएकाहरूले नक्कल गर्न खोज्नु सामान्य थियो । कट्टर समाजमा त नक्कल पनि वर्जित नै थियो ।
फ्रेन्च रिभोलुसनले भने पहिरनको नक्कल ठालू मानिसबाट आम मानिसमा होइन, आम मानिसबाट ठालू मानिसतिर सारिदियो । सन् १७८९ को यो क्रान्तिले पहिरनमा पनि क्रान्ति ल्यायो । सम्भ्रान्त र सामन्तहरूको पहिरन–शैलीलाई परिवर्तकारीहरूले रिजेक्ट गरिदिए । उनीहरूले लामो पत्लुन र ट्राउजरलाई चल्तीमा ल्याए । बरु सम्भ्रान्तहरू नै यो फेसनतिर तानिए । पहिलोपटक पहिरनको दुनियाँले ‘बटम अप अप्रोजलाई’ मूर्तरूप दियो ।
तर, महिलाहरूलाई ट्राउजर र पत्लुन लगाउन वर्जित थियो । जो ट्राउजर र पत्लुन लगाएर सडकमा आउँथे उनीहरू पक्राउमा पर्थे । ७ नोभेम्बर १८०० मा पुरुषको कपडामा सडकमा देखिने महिलाहरूलाई पक्राउ आदेश जारी गरेको थियो फ्रान्स प्रशासनले । प्रशासन मात्र होइन पुरातन समाज पनि महिलाको पहिरनको पछि लागेको थियो । उखानटुक्का हानिन्थ्यो– ‘पेटीकोट लाएर घरमै बस । श्रीमान्को ट्राउजर छोडिदेऊ ।’ यतिले पुगेन, उनीहरू भतपिचासको नाम लिएर भए पनि महिलाहरूलाई तर्साउन लागिपर्थे– ‘ट्राउजर लगाएर हल्लिने आइमाई भएको घरमा पिचासको बास हुन्छ ।’ फ्रान्स क्रान्तिका मुख्य हिस्सेदार महिलाहरू न पक्राउ आदेशसँग डराए न त उखान–टुक्केहरूसँग । तर, ट्राउजर क्रान्ति रोकिएन ।
महिलाहरूले बाध्यकारी रूपमा थोपरिएको टाइट स्कर्टको उकुसमुकुसबाट आफूलाई मुक्त गरे । ट्राउजरमा ठाँटिएरै छोडे । ट्राउजर लगाउनु केवल पहिरन लगाउनु भएन अब त्यो आत्मनिर्भरता, सशक्तता र स्वतन्त्रताको विम्ब बनिदियो । ‘ब्लुमर क्लब सिगार’ भित्तामा यो वाक्यसहितको ब्यानर टाँसेर, टाउकोमा ह्याट, हातमा सिगार, टक्लेको बुट, स्कर्टभित्र ब्लुमर(भित्र लगाइने स्ल्याक्स) सहित दुई महिला रवाफिलो पारामा देखा परे । उखानटुक्के र प्रशासनले घुँडा टेके । कपडालाई लिएर गरिएको संसारभरको लैंगिक राजनीतिलाई यसले झट्का दिएर गयो । पहिरन अभियन्ता एमेलिया ब्लुमरले पूरै शरीर ढाकिने पौडी पहिरनको डिजाइन गरेकी थिइन् । उनी आफैंले यो पहिरन लगाएकी थिइन् सुरुमा । बिस्तारै यो ब्लुमर ट्रेन्डको रूपमा विकास भयो ।
सन् १९५० को दशकमा झुल्केको ब्लु जिन्सले लुगासँग टाँसिएको लैंगिक मूल्य–मान्यता र नैतिकतामा सानदार प्रहार गर्‍यो । महिला, पुरुष, कामदार, मालिक सबैका लागि यो कपडा प्रिय बन्यो । पोसाकको इतिहास र वर्तमानमा ब्लु जिन्स जति भाइरल अरू कोही छ्रैन । यसको ठाँट नै बेग्लै छ । संसारलाई समानताको दिशामा डोर्‍याउन देश र समाजले नीति र कानुनमा सुधार ल्याउँदै गएको पक्का हो ।
यस अलावा मानिसको दिनदिनैको जीवनमा समानताको स्वाद दिलाउने ट्राउजर र ब्लु जिन्सको जय होस् । पोसाकसँग जोडिएको इतिहास, भूगोल र समाजको रङहरूमा हरसमयले अर्को रङ भर्दै जाँदै छ– नांगोपनदेखि कपडासम्मको यात्रामा । कपडासँग जोडिएको कुलीन र कुल्लीको वर्गीय विभाजनदेखि पोसाकको बाहिरी आवरणमा देखिँदै गएको समानतातर्फको यात्रामा सभ्यता लम्केको छ । इतिहासको यो इन्द्रेणी प्रकाशमा मानव सभ्यता आफ्नै गतिमा मस्त छ ।
प्रकाशित : माघ १०, २०७७ १०:५८
भूगोलका फरक हिस्सा हिँड्नुअघि
माघ १०, २०७७ रामगोपाल आशुतोष
तिमी गए पनितिम्रो मायाको उपहार रहिरहनेछ । जस्तो –चन्द्रसूर्य आकाशमा–धरतीमा हावापानी
–रहिरहन्छ मुटुमा धड्कन
–उस्तै रहनेछन् मेरा बदमासी
सबै सबै रहिरहनेछन्
बाँचेसम्म –यो मुटुको गहिराइमा
रहेसम्म –यो ब्रह्माण्डको विशालतामा
लाटी –किन रोएकी यसरी !?
रोक –रोक, आँसु बगाउन रोक !
र, हाँस !
जून जसरी हाँस्न आउँदैन होला –ठीक छ !
फूलजस्तै मुस्काउन आउँदैन होला –केही छैन !!
तर हाँस !!
अघोर अँध्यारोसँग लड्दै उषाको पहिलो किरण
घनघोर वर्षात्मा बादलसँग युद्ध गर्दै
जोडजोडले हाँस्न नआए पनि
छाती खोलेर हाँस्न नसके पनि
एकचोटि हाँस ......
वा मुसुक्क हाँस ........ !
आजपछि –श्रद्धामा हुनेछौँ !
तिमी र मलाई
भूगोलको आधाआधा गोलार्द्ध हिँड्नुछ !
लौ, अब त हाँस !
र, म पनि हाँस्छु
..............बिस्तारै ................. !!!
प्रकाशित : माघ १०, २०७७ १४:०३
नयाँ उपन्यासकारको बकपत्र
साहित्यकार, आन्दोलन र बहस
हेर्दा जाबो कागज !
मन्दिर, तर हेर्ने सिनेमाको !